समाचार Archives - Araniko Times
काठमाडौं । इरानमा करिब एक करोड मानिस कुनै न कुनै अ’पाङ्गताबाट ग्र’स्त छन् । रुढीवादी देश इरानमा से क्स जस्तो विषयमा कुरा गर्न वर्जित छ । यस्तोमा अ’पाङ्गता भएका महिलाको विषयमा सेक्सबारे सोच्न पनि सकिँदैन । उत्तरी इरानको एउटा सानो गाउँमा बस्ने ४१ वर्षकी अपाङ्गता भएकी महिला मितरा फराजदाहले आफ्नो अनुभव र निराशाबारे कुरा गरेकी […]
एजेन्सी । एक गर्भवती महिला जो सन्तानलाई जन्मदिन पुरै तयारी अवस्थामा थिइन् । एक छोरा थिए । श्रीमान र उनी दोस्रो सन्तानको आगमनको तयारीमा थिए । तर उनीहरुको जिवनमा नसोचेको घटना भयो । भारतमा फैलीएको महामारीले गर्भवती महिलाई पनि छोयो। उनी आफै स्वास्थ्यकर्मी पनि थिइन् । त्यसैले स्वास्थ्यका बारेमा पनि सचेत थिइन् । तर भाइरसले […]
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) प्रतिस्पर्धामा केही कमजोर सावित भइएला । वैदेशिक क्षेत्रबाट भने सामान्य लाभ लिन सकिनेछ । आज तपाइलाई परिवार तथा साथीभाइको सहयोग प्राप्त होला । साथै, धनलाभको पनि योग रहेको छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाउने समय छ । आफन्त, परिवारजनमा आत्मीयभाव बढ्नेछ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् भने व्यापारमा पनि बढी नै फाइदा […]
धनगढी: बैशाख १८ गते शनिबार सामाजिक सञ्जालमा ‘टिकटक’मा अपलोड भएको एउटा भिडियोमा मास्क लगाएकी एक महिला देखिन्छन्। उनले बनाएको टिकटकमा भनिएको थियो ‘आमा धेरै थकित छु, जिन्दगीदेखि। सायद अब बाँच्न सक्दिँन होला यो स्वार्थी संसारमा। मलाई माफ गरिदेउ है आमा तिमीलाई खुसी दिन सकिँन।’ त्यसकै भोलिपल्ट आइतबार उनले फेरि थप एक भिडिओ अपलोड गरिन्। बिस्तरामै […]
जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल क ले ज ले अ स्प ता ल मा भएको अक्सिजनले साँझ ४ बजेसम्मलाई मा त्र पुग्ने भएकाले त्यसअगावै आ–आफ्नो व्य व स्था गर्न बि रा मी पक्षलाई आ ग्र ह गर्दै मंगलबार बि हा न सू च ना जा री गर्‍यो । अक्सिजन उपलब्ध हुन न सक् ने भएकाले बिरामीलाई […]
तपाईंको शरीरले जति वी’ र्य बनाउँछ, त्यस हिसाबले जीवनभर एउटै से’ क्स पा’ र्ट’ नर हुनु उति राम्रो आइडिया पक्कै होइन । यसको सदुपयोग गर्ने हो भने त से ‘क्स पा’ र्टनर बढीभन्दा बढी हुनुपर्ने हो, होइन त ? त्यसैले त स्त’ नपायी र अन्य जन्तु समूहमा एउटै से’ क्स पा’ र्ट’ नर विरलै हुन्छ […]
काठमान्डौ , कोरोना संक्रमणबाट काभ्रेका निमा लामाको नि’धन भएको छ ।काभ्रेको भीरपोखरी गाउँपालिका-२ करमडाँडा घर भएका लामाको कोरोना संक्रमणबाट काभ्रेमा नि’धन भएको हो । राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका लामा व्यापारीहरुलाई ध’म्की दिएर रकम असुलेको अभियोगमा पटकपटक पक्राउ पर्दै छु’टेका थिए । लामा बानेश्वर, कोटेश्वर र काँडाघारी एरियामा समुह बनाइ ब्यापारीलाई ध’म्कि दिने […]
ओलीको राजनितिक अस्त्रको कमाल , रोकियो राजिनामा !
सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा रहेको नेकपा एमाले नेपाल समूह सोमबार बिहान एकाएक राजीनामा नदिने बरु संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णयमा पुग्यो। आइतबार राति नेता माधव नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर लोकतन्त्र र पार्टी हितका लागि सांसदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको जनाउ दिएका थिए। सोमबार बिहान सांसदबीचको छलफलपछि भने राजीनामाबाट पछि हटेर […]
नेपालमा गाई र गोरुलाई यमपञ्चकमा पूजा गरिन्छ । गाईलाई त लक्ष्मीको प्रतीक मानिन्छ । यसरी पूजा गरिने भएकाले नेपालमा गाई गोरुको मासु खाने चलन छैन । केही समुदाय र सम्प्रदायमा भने यो नियम लागु नभएको पनि पाइएको छ । उता झापामा भने अनौठो घटना भएको छ । दुई भारतीय नागरिक नेपाल आएर मासुको बिक्री गर्दै […]
काठमाडौं । नेपाली गित संगीतको माहोलमा तथा चलचित्र क्षेत्रमा बिगत लामो समय बिताएकी रश्मि भट्टको नि,धन भएको छ । रश्मि भट्टले निकै नै कारुणिक अभिनय गर्दै नेपालि गीतसंगीतमा तथा चलचित्र क्षेत्रमा निकै ठुलो योगदान पुर्याएकी छन् । एउटा अमुल्या व्यक्तित्व गुमाउदा नेपालि गित संगित तथा चलचित्र क्षेत्रले ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्नेछ । यो भने वास्तविकता […]